Waa kuwee labada Kooxood ee ku tartamaya saxiixa ciyaaryahanka PSG ee Angel Di Maria?? – Gool FM
(Paris) 18 Jan 2021. Sida wararku ay sheegayaan labo kooxood oo waa weyn ayaa ku tartamaya saxiixa ciyaaryahanka naadiga PSG ee Angel Di Maria.
Waxaa la soo warinayaa in xiddiga reer Argentine oo booskiisa joogtada ah ka haysta Macallin Pochettino ee Di Maria inay xiiseynayaan Kooxaha Juve iyo Spurs.
Warsidaha la yiraahdo Don Balon ayaa warinaya in Kooxaha Juventus iyo Tottenham ay labaduba xiiseynayaan saxiixa Angel Di Maria.
Xiddiga xulka qaranka Argentine, kaasoo si weyn u garanaya macallinka Spurs ee Jose Mourinho oo uu ka soo hoos ciyaaray maalmihiisii wacnaa ee Real Madrid ayaa loo arkaa inuu qeyb muhiim ah ka yahay qorshaha Macallin Mauricio Pochettino uu dib ugu hagaajinayo Paris Saint-Germain.
Sidoo kale naadiga reer Talyaani ee Juventus ayaa xiiso u muujinaysa Di Maria, iyadoo Tababare Pochettino Wiilka ay dhalasho wadaagga yihiin uu ku soo bilaabay safka hore afartii kulan ee ugu dambeeyey.